China mmanu mmanu mama laminating igwe KP-YJ128C rụpụta na Factory | Kangpa
Mmanụ mmanụ mama laminating igwe KP-YJ128C
1. The dum igwe na-onwem na unwinding, akpaka ndiiche mgbazi, tupu ihicha, mejupụtara ihicha, mmiri jụrụ, akpaka slitting, n'elu esemokwu asọfe na ndị ọzọ nkeji. Ngwakọta mejupụtara nwere uru nke mkpuchi mkpuchi, ezigbo ihe mejupụtara, enweghị nrụrụ, enweghị ụfụfụ, enweghị mmetụ, mmetụta aka dị mma, ịdị nro, ikuku ikuku dị mma, na ikuku na-edozi.
2. E nwere ọtụtụ ụdị nke ihe ndị mejupụtara, ọkachasị dabara maka mkpuchi na ngwakọta nke akwa na akwa, akwa na akwa na akwa, akwa na akwa na akpụkpọ anụ, ogbo na flannel, sponge and leather, wdg.
3. wghaghachi na ịmegharị nwere ike ịhọrọ nhazi kwesịrị ekwesị dịka ihe dị iche iche si dị;
KP-YJ128C Performance oke:
Onyinye ike: 380V 50HZ 3 phase
Irè obosara: 1800mm
Roll elu obosara: 1300mm
Heating ala nkọwa: -1500 * 1800mm
kpo oku usoro: Electric kpo oku
Usoro mkpuchi: Mgbape mbufe ihe mkpuchi
Mechanical imewe ọsọ: 0-50m / min
Ike niile: 50kw
Akụkụ (L * W * H): Ihe dị ka 11600 * 2000 * 2200mm
ibu: Banyere 6500kg (n'okpuru ngwaahịa ahụ)
Atụmatụ ụlọ ：
KP -105X mama ebe nyefe onyinye igwe.
Na-eji na atụmatụ:
A na-ejikarị ya eme ihe maka ngwakọta nke akwa uwe, pola ajị anụ, nke na-abụghị nke ajị anụ, na-agbatị ákwà, akwa na-enweghị akwa, akpụkpọ anụ, ogbo, akwa akwa na ihe ndị ọzọ. Ọ dabara na ụlọ ọrụ dịka uwe, ime ụgbọ ala, akpụkpọ ụkwụ na okpu, akpa, ịchọ mma, na akwa ụlọ.
4. Dika njirimara nke ihe di iche, enwere ike itinye ma obu wepu ufodu ngwaọrụ;
5. Okwesiri maka mkpuchi na ngwakọta nke mmiri na-agbaze mmiri na ihe mgbaze, na-achọpụta ọrụ nke otu igwe nwere ọtụtụ ọrụ.
6. Ọnụ ọgụgụ nke mama na ụdị gluu nwere ike gbanwee dịka ihe na mkpa n'ezie.
7. Ike ikpo oku n’ọkụ eletrik, uzuoku ma ọ bụ mmanụ ọkụ.
8. Enwere ike ịkọwa obosara nke igwe ala nke igwe dịka obosara nke ezigbo ihe ahụ.
9. The dum usoro nwere ike rụọ ọrụ ma na-achịkwa nwere ọgụgụ isi PLC omume ihuenyo mmetụ ma ọ bụ n'ibu ụdị.
Nke gara aga: Gluu ala
Osote: Igwe mkpirisi hydraulic nke anọ
Gluu Ngwa ngwa
Gluu Laminating igwe
Gluu Lamination igwe
Gluu ala Machine
Water Dabere mama Laminating Machine
Hot gbazee mama mama Laminating Machine na Ce Asambodo, Pur Hot gbazee gluu Nonwoven Laminating Machine, Automatic Hot gbazee mama mama Laminating Machine, Hot gbazee gluu Ngwa, Pur Hot gbazee nrapado Laminating Machine, Hot gbazee mama mama Laminating Machine N'ihi Uwe,